२५ हजार सक्रिय संक्रमित पुगे फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस – Rapti Khabar
असोज ७, काठमाडौं, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २५ हजार संक्रमित पुगे फेरि लकडाउन गर्न सकिने गरी प्रस्ताव गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बुधबार नियमित प्रेस ब्रिफिङमा सक्रिय संक्रमित २५ हजार पुगे सरकारलाई फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस गरिने जानकारी गराएका हुन्।
उनले सक्रिय संक्रमित संख्या २५ हजार बढी पुगे स्वास्थ्य पूर्वाधारले धान्न गाह्रो हुने जनाए। बुधबारसम्म सक्रिय संक्रमितकाे संख्या १४ हजार ४१४ छ।
यस्तै मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको भन्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुन नसक्ने व्यवसायहरू कम्तिमा एक महिना नखोल्न समेत सिफारिस गर्ने भएको छ।
उपत्यकामा थपिए ६३७ संक्रमित, ४३ जना भेन्टिलेटरमा
उपत्यकामा बुधबार ६३७ जनामा कोरोनाभाइस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ४९२, ललितपुरमा ५० र भक्तपुरमा ९५ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ६३७ सहित देशभर भने ११७२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमितमध्ये महिला ४२६ र पुरुष ७४६ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । यससँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या ६७ हजार ८०४ पुगेको छ ।
यस्तै हाल देशभर २२० जना आईसीयू र ४३ जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् । यस्तै हाल क्वारेन्टिनमा ७ हजार १०४ जना रहँदा कोरोना निको हुनेको संख्या भने ४९ हजार ९५४ जना रहेका छन् ।
यस्तै बितेको २४ घण्टामा एक महिला सहित ७ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या ४३६ पुगेको छ ।
यसैबीच हालसम्म सोलुखुम्बु, रसुवा, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्ला कोरोनमुक्त रहेको छ भने मोरङ, सिरहा, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र रुपन्देहीमा ५०० बढी संक्रमित रहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेभन्दा बढी पिसिआर परीक्षण शुल्क लिने अस्पताल र प्रयोगशालाहरूको अनुगमन गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अस्पताल र प्रयोगशालाहरूले बढी शुल्क लिएको गुनासो आएकाले सम्बन्धित निकायलाई अनुगमन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको जानकारी गराएका हुन्।
पिसिआर परीक्षणको अनुमति र अनुगमन गर्ने जिम्मा भनेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला हो। अहिले देशभर ४९ वटा प्रयोगशालाहरूले पिसिआर परीक्षण गर्दै आएका छन्।
तीमध्ये केही प्रयोगशालाहरूले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइएको पाइएपछि मन्त्रालयले ती प्रयोगशालाहरूको अनुगमन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले सबै प्रयोगशालाहरूलाई पिसिआर परीक्षण गरेबापत अधिकतम दुई हजार रुपैयाँ लिन पाउने भनेको छ।